Browser မှာ FB ဖွင့်မရလို့ပါ — MYSTERY ZILLION
Browser မှာ FB ဖွင့်မရလို့ပါ
January 2015 edited January 2015 in Internet & Email
ကျတော့် ကွန်ပျူတာမှာ Browser (Firefox, Chrome, IE) ဖွင့်ပြီး www.facebook.com လို့ရိုက်လိုက်ရင် wwww.faceboook.com ကို တိုက်ရိုက်လင့်ခ်၀င်နေလို့ပါ။ Plug-in ဖြုတ်၊ Firefox ကိုပြန်ဖြုတ်ပြီး ပြန်တင်လည်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပါအုန်း။
January 2015 edited January 2015 Administrators
www.facebook.com ရိုက်ရင် www.facebook.com ပဲ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ မေးတဲ့ မေးခွန်းကို ကျွန်တော် သိပ်နားမလည်ဘူး ? google ကနေ သွားချင်တယ်ဆိုရင် facebook လို့ပဲ ရိုက်လိုက်ရင် google search ကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ် ကိုစေတန်.. အဲလို domain အမှန်ကို မရောက်ပဲ wwww.faceboook.com ဆိုပီး "W" တစ်လုံးနဲ့ "O" တစ်လုံးပိုနေလို့ပါ။ "www.facebook.com" လို့ရိုက်လိုက်ရင် အဲဒီ domain နှစ်ခုက အမှန်ပေါ်လိုက်၊ အမှားပေါ်လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး "W"နဲ့ "O"တစ်လုံးပိုတဲ့ "wwww.faceboook.com" ဆိုတဲ့ လိပ်စာနဲ့ အဆုံးသတ်သွားလို့ပါ
look like maleware or spyware. Need to scan your computer first.
Are you using windows ? If you are using windows, check C:\_Windows\_System32\_drivers\_etc\_hosts file. Is there any text related with facebook.com ?